Kuhle Rooftop ithilomu Futhi Cafes EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Kuhle Rooftop ithilomu Futhi Cafes EYurophu
Ingabe uwuhlobo lomuntu othanda ukuhamba nokuvakasha kwebhasi? Khona-ke lokhu okuthunyelwe Akusikho okwenu! Sicabanga ukuthi indlela engcono kakhulu ukubona amanye amasayithi yaseYurophu yisakhiwo sodumo iwukuba ephuza champagne ku ithala esophahleni nobe cafe. Here are some Best rooftop restaurants and cafes in Europe so you can sight-see in style.
Kuhle esophahleni zokudla nezindawo zokudla e-Europe: Atlante Star Ihhotela – Rome, Italy
lapho Rome, udinga ukubona zonke izindawo ezinhle nezasendulo - njengeColosseum noma uMthombo waseTrevi. Kodwa nawe kufanele ukujabulela umbono omuhle lomuzi. futhi, uma uvakashela ibha ophahleni Atlante Star Ihhotela ube nombono lamazwe amabili. Yingakho sicabanga ukuthi ingenye yezindawo zokudlela ezinhle kakhulu nezindawo zokudlela ezinhle ophahleni eYurophu!
Jabulela ukubukwa elithandekayo Vatican City futhi eRoma lapho nokuba espresso noma ingilazi iwayini. Kukhona ongakhetha eziningi ukuqeda usuku ungcono lapha akuzona!
Okuhambayo eRoma ngesitimela
izitimela Fast kusuka London to Rome take around 14 amahora, covering a distance of approximately 1,434 amakhilomitha. Kunezinhlelo njalo phezu umzila wesitimela phakathi London neRoma. Trains for this journey usually open for booking around 12 izinyanga ngaphambili. Uma ukubhuka kungakavulelwa izinsuku zakho ungasetha isexwayiso sokubhuka ukuze uthole i-imeyili ngosuku lapho amathikithi ashibhe ayatholakala ohambweni lwakho usuka eLondon uye eRoma ngesitimela. Sebenzisa Londoloza Isitimela uku-oda ngokushesha futhi kalula!
Kuhle esophahleni zokudla nezindawo zokudla e-Europe: The Cube Bar - Galeries Lafayette - Paris, France
Ngoba kufike umuntu mumbe outlooks best Paris, amabombo ophahleni we Galeries Lafayette umnyango esitolo. Seven izibuya up, lokhu ithala 1500m inikeza umxhwele ngempela-360 ° buka phezu Paris. I-Opera House ungaphakathi uhla close kanye Eiffel Tower kuyinto okwasemuva yayo. Kodwa hhayi kuphela mayelana ukubukwa, but the terrace also holds a modern and sleek rooftop bar called The Cube Bar.
Evulekile futhi zemvelo ekubekeni, ithala unikeza abantu abangu kokubili ilanga futhi ezimboziwe ngaphezulu ezindaweni emthunzini. Kusukela ibha esophahleni, ungakwazi oda ubhiya abandayo, Iziphuzo aqabulayo kanye ukudla okululana waseParis labangela ukuqala komkhakha. Lokhu ngokuqinisekile kungenye yezindawo zokudlela ezinhle kakhulu kanye nezindawo zokudlela ezinhle eYurophu, ngakho kube nesikhathi esihle ngiyothatha into esihlalweni!
Ukuya Paris ngesitimela
London kuyinto ethandwayo yekucala abahambi eziningi eholidini baseYurophu. A short futhi ukhululekile ngesitimela uxhuma inhlokodolobha British nge idolobha laseFrance elinabantu lothando, Paris.
Kukhona eyodwa kuphela isitimela egijima ngokuqondile London eParis: i-Eurostar isitimela sejubane elisheshayo. Ngakho elenza ngokukhetha ilungelo ukuqeqesha kulula kancane! Qiniseka ukuthi ukuthenga amathikithi akho isitimela ngokusebenzisa Londoloza Isitimela Nokho!
Kuhle esophahleni zokudla nezindawo zokudla e-Europe: Aria Hotel High Note Sky Bar – Budapest, Hungary
Aria Hotel High Note Sky bar in Budapest inikeza enkulu 360-degree of Buda futhi Pest. Itholakala at inhliziyo Pest, nje ungakwazi nokujikijela itshe lifike kude St. Basilica kaStefanu. Le bha bubuhle stylish has a Vibe okuphumuzayo kakhulu, futhi ngendlela ephelele ukujabulela Budapest nge yakho umndeni nabangane.
Ukuya Budapest ngesitimela
I isitimela journey from London to Budapest is safe, lula futhi ezingabizi futhi kuthatha nje 24 amahora, ngu Eurostar eParis futhi ngesivinini TGV kusukela Paris Munich, then overnight sleeper to Budapest. Noma kukhona ukuxhumana nge Paris futhi Munich, noma nge e-Brussels, Cologne & Vienna.
Kuhle esophahleni zokudla nezindawo zokudla e-Europe – Barcelona
1881 per SAGARDI is the restaurant of the History Museum Catalonia, isikhala eyingqayizivele edolobheni esibheke port Barcelona futhi esizinikezele ngokuphelele Mediterranean cuisine, kusukela elwandle kuze kube umhlaba. Lokhu nakho usuphothuliwe ku Terrace ka Indianes, owayephila ithala cocktail ibha esibheke port Barcelona.
Ukuya Barcelona ngesitimela
Kulula ukuhamba kusukela UK ukuze Spain ngesitimela. A morning Eurostar to Paris in 2h20 from £44 one-way or £58 return, lunch at the remarkable Train Bleu restaurant at the Gare de Lyon, then the afternoon double-deck TGV Duplex to Figueres (for the Salvador Dali Museum), Girona & Barcelona kusuka € 39 indlela ngayinye. *Amanani angaphansi ukushintsha.
Ready ukuthi abathathe izikhwama yakho nokuvakashela Kuhle esophahleni zokudla nezindawo zokudla e-Europe? Ake Londoloza Isitimela unakekele yokuthola lapho udinga ukuba!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog, noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/best-rooftop-restaurants-cafes-europe/- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
#BestCafes #BestEuropeRestaurant #BestRestaurants #cafeview #restaurantview #esophahleni europetravel longtrainjourneys Tranride Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi